ခင်ပွန်းပေးတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်လေးကို မဲဖောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာကို လှူဒါန်းပေးသွားမည့် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ – Bagan Thar
ခင်ပွန်းပေးတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်လေးကို မဲဖောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာကို လှူဒါန်းပေးသွားမည့် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ
ခင်ပွန်းပေးတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်လေးကို မဲဖောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာကို လှူဒါန်းပေးသွားမည့် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ
ကိုဇဏ်ကခရစ္စကိုမင်္ဂလာ သက်တမ်း ၁၃ နှစ်မြောက်မှာsurpriseလက်ဆောင်လေးအနေနဲ့အခုပုံထဲမှာဝတ်ပြထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးနဲ့နားကပ်လေးပေးခဲ့ပါတယ်၊Fundraisingလုပ်ဖို့ပစ္စည်းလေးတွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီ့ပစ္စည်းလေးနဲ့စလုပ်ချင်တယ်လို့ခရစ္စကကိုဇဏ်ကိုပြောပြပြီးခွင့်တောင်းလိုက်တော့သူကလည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲလုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်။
ကိုဇဏ္ကခရစၥကိုမဂၤလာ သက္တမ္း ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္မွာsurpriseလက္ေဆာင္ေလးအေနနဲ႕အခုပုံထဲမွာဝတ္ျပထားတဲ့ဆြဲႀကိဳးေလးနဲ႕နားကပ္ေလးေပးခဲ့ပါတယ္၊Fundraisingလုပ္ဖို႔ပစၥည္းေလးေတြစဥ္းစားလိုက္တဲ့အခါမွာအဲဒီ့ပစၥည္းေလးနဲ႕စလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ခရစၥကကိုဇဏ္ကိုေျပာျပၿပီးခြင့္ေတာင္းလိုက္ေတာ့သူကလည္းၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပဲလုပ္ပါလို႔ေျပာပါတယ္။
ပြည်သူတွေအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရင်း လက်ကိုဓားနဲ့ခုတ်မိတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ
ရိုင်းခံရတိုင်း ၀ဋ်တစ်ခု ကျေသွားတယ်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး သူမခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး
ဘယ်ကိုသွားသွား လိုက်လာပြီး ချစ်ပေးသူတဲ့သူတွေကို...
လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ ပြည်သူတွေ ပါဝင်လို့ရမယ့်...
လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေကို ဘယ်သူကိုမှ မခေါ်ဘဲ တစ်ယောက်ထဲ...
ကျွန်မလို ပညာမတတ်တဲ့သူ မရှိအောင်လို့...
Copyright © 2022. Created by Bagan Thar.